» भरतपुरमा ७२ घण्टा भित्रै तयार भयो कोरोना अस्पताल, आजबाटै सेवा प्रारम्भ
भरतपुरमा ७२ घण्टा भित्रै तयार भयो कोरोना अस्पताल, आजबाटै सेवा प्रारम्भ
७ चैत्र २०७६, शुक्रबार १३:३१ प्रकाशित
चितवन – विश्वभर फैलिदै गएको कोरोना भाइरस रोकथामको लागि चितवनमा भरतपुर कोरोना बिशेष (अस्थायी) अस्पताल तयार भएको छ । पुर्व घोषित ७२ घण्टा भित्र नै चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा ५० शैयाको अस्पातल तयार भएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारका सामाजिक बिकास मन्त्री युवराज दुलालले अस्पातलले सेवा प्रारम्भ गरेको घोषणा गरे । घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दुलालले कोरोना भाइरसको चुनौती सामना गर्न मानसिक रुपमा मात्र नभई भौतिक रुपमै नेपाली तयार छन् भन्ने सन्देश भरतपुरले दिएको बताए ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु कोरोना बिरुद्द लड्न पर्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि त्यही अनुसारको तयारी तिव्र पारेको उनले बताए । उनले बाग्मती प्रदेशमा ३ सय आईसियुसहित एक हजार शैयाको आईसुलेसनको व्यवस्था भईसकेको जानकारी दिए । उनले सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरुले कोरोनाबाट बच्न पर्याप्त तयारी गरेकोले आतंकित नहुन आग्रह पनि गरे । यस्तै उनले चिकित्सकहरुको सुरक्षाको लागि पनि सरकारले तयारी गरेको बताए ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले अस्पातल संञ्चालनका लागि संघिय सरकारले ७५ प्रतिशत सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्दता जनाएको बताईन् । मेयर दाहालले संघिय सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभए स्थानिय सरकारले बिकास खर्च कटौती गरेर भए पनि उपलब्ध गराउने बताईन् ।
उनले अहिले बिकास निर्माण भन्दा पनि जनताको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रहेको भन्दै महानगरपालिका यसको लागि गम्भिर रहेको बताईन् । अस्पातलमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरुको स्वास्थ्यको लागि पनि सरकार गम्भिर रहेको उनले बताईन् । स्थानिय सरकारबाट सेवा सुविधाको लागि कुनै किसिमको कन्जुस्याइँ नहुने उनको भनाई थियो । उनले अस्पताल निर्माणका लागि ७२ घण्टासम्म निरन्तर खट्ने सम्पूर्ण निकाय तथा कर्माचारीहरुलाई धन्यवाद दिईन् ।
भरतपुर महानगरको अगुवाईमा चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा निर्माण गरिएको अस्पातलले आजबाट ५० बेडको ओपिडी सेवा शुरु गरेको छ । अस्पातलका लागि १० शैयाको सघन उपचार कक्ष, १० शैयाको हाई डिपेन्डेन्ट यूनिट (एचडियू) पनि शुरु गर्ने तयारी भईरहेको छ। यस्तै प्रयोगशाला, एक्सरे, औषधि लगायतको व्यवस्थापनको काम पनि सकिएको छ । जिल्ला र बाहिरका अस्पताल एबं बिभिन्न स्वास्थ्य परिक्षण गरिएका क्षेत्रहरुमा भेटिएका शंकास्पद बिरामीहरुलाई यस अस्पतालमा राखिने छ ।
भरतपुर महानगरको अगुवाईमा मंगलबार सम्पन्न सरोकारवालाहरुको बैठकले ७० शैयाको अस्पताल तत्काल संञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलले अस्पतालको बहिरंग सेवा डा. भोजराज अधिकारी र चिकित्सक संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष डा. अनिल बिक्रम कार्कीले समन्वय गरि संञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बैठकले दिएको छ । यसै गरि जनरलवाड बिपि कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. बिजयचन्द्र आचार्य, एच डि यू संञ्चालन गर्न कलेज अफ मेडीकल साईन्सेस एबं नीजि अस्पताल समन्वय समिति र सघन उपचार कक्षको जिम्मेवारी चितवन मेडीकल कलेजलाई दिईएको छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडीकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारी र आबश्यक पूर्बाधारको व्यवस्थापनका लागि भरतपुर महानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, उद्योग वाणिज्य संघ चितवन र उद्योग संघ चितवनलाई बैठकले जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले प्रयोगशाला र रेडीयोलोजि बिभाग संञ्चालन गर्न नीजि अस्पताल समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अस्पतालमा परिचालन हुने चिकित्सक, कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीलाई बिश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशन अनुसारको आबश्यक तालिम समेत दिईएको छ ।